Kedu oge kachasị mma iji rie maka ọnwụ? - Mmega
Isi > Mmega > Oge nri na ọnwụ ibu - ihe eji enyere mmadụ aka ime ihe
Kedu oge kachasị mma iji rie maka ọnwụ?
Ka ọ dị ugbu a, nnyocha e mere kpughereoge kacha mma iji rienri ụtụtụ gị, nri ehihie na nri abalị ma ị chọọhapụ ibu ibu:
Nri ụtụtụ - naanị mgbe elekere asaa nke ụtụtụ, na 7.11 am họọrọ dị ka ezigbo.
Nri ehihie - n'etiti 12.30 pm na 1 pm, na 12.38 pm ịbụoge kacha mma iji rie.
Nri abalị - n’etiti 6 pm na 6.30 pm, ọkacha mma 6.14 pm.
Ọkt 30 2019
Hey ụmụ nwoke dr Berg ebe a n'isiokwu a anyị ga-ekwu maka oge kachasị mma ịkwụsị ibu Ọ dị mma, nke a dabere na usoro akpọrọ ibu ọnụ mgbe ị na-eri nri ogologo oge n'ihi na ihe ga-eme ga-eme dozie ọnọdụ akpọrọ mgbochi insulin ma ebe insulin a dị oke elu mana ọ naghị arụ ọrụ ọfụma nke mere na enwere insulin, ị gaghị adalata ma ọ bụrụ na ị nwere afọ n'ihi na ị nwere insulin buru ibu ma ị ga-aga nri ma ọ bụ nri atọ ma ọ bụ na-ebu ọnụ na-eri nri n'oge ọ bụla, ihe ọ bụla ị na-echeghị banyere ịhapụ akwara gị, ị gaghị atụfu ahụ gị nke a ga-echebe ndị na-edozi ahụ na akwara n'eziokwu ọ bụ ụzọ dị mma iji mụbaa testosterone na uto hormone ma Fat Burning Hormones Hormones nke na-enyere aka iwulite ahụ ike ka ị ghara ida ahụ ike. Imirikiti ndị mmadụ agaghị enwe ike iri nri ugboro abụọ n'ụbọchị ma ha ga-ebido nri ugboro atọ n'ụbọchị, mana ebumnuche bụ ịkwaga na nri abụọ kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ị naghị echefu ibu, ọ bụrụ na ị nwere ya na otu nkeji, mgbe inwere ezi nguzo ozugbo, o gha esiri ike igha eri rie n’ihi na obara gi obula atalatala ma ebum n’uche bu ihe m ga egosi gi ebe a, odikwa mana o nwere ike were izu ole ma ole. ma ọ bụ ọbụlagodi otu ọnwa iji mee ka ọ mara gị ahụ, yabụ ị nwere ike iri nri ugboro atọ kwa ụbọchị dị ka mmalite, mana ọ kachasị oge kachasị mma ịme nke ahụ ga-abụ 11:30 nke ụtụtụ, yabụ na ị ga-eri 11:30 nke ụtụtụ ma mesịa nke na-esote Oge ị na-eri ya ugbu a bụrụ elekere ise nke ụtụtụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ya wee rie 4:30 ụtụtụ, yabụ ebumnuche na 11:30 nke ụtụtụ bụ inwe afọ ojuju ma ọ bụrụ na ị naghị eri naanị otu nri ezigbo nri siri ike l oge nwere protein greens na ụfọdụ abụba dị mma dịkwa mma ịmela obere abụba nke a ga-eme gị nsogbu ka ịchọọ ịhazi abụba ndị ahụ na afọ ojuju gị ka ị nwee ike isi na nri a gaa nri a ma ọ bụrụ na ịnweghị ike isi na nri a rie nri a, ọ pụtara: na ịnweghị oke abụba ugbu a, ọ dị mma ịnwe obere agụụ, mana mgbe agụụ na-agụ gị naanị ihe ị nwere bụ nsogbu shuga ọbara, gị ga-eri nri ugboro atọ n’ụbọchị ọzọ ị nweghị asambodo, eee? na mmetụta na ị ga-eche na afọ gị na-ekpuchi ọtụtụ obere ị ga-eche na afọ gị na-adalata ma na-abata n'ihi na ị na-agba abụba afọ, nke a bụ ụzọ kachasị mma iji tufuo afọ gị n'ihi na isi anyị ewere anyị bụ anyị weghachite ọkwa insulin ma werekwa elekere ise nke abalị otu protein na-acha akwụkwọ ndụ na abụba - afọ juru gị afọ nke ukwuu, ị nwere ike ịme ihe ọ bụla site na mgbe ahụ ruo ụtụtụ? What bụ ihe na-echegbu gị, ma eleghị anya, ị ga-egbu agụụ, ị maara na ọ bụghị n'ihi na nkezi ahụ nwere ọtụtụ ihe ma ana m ekwu maka abụba ị ga-ebi, yabụ isi bie na abụba abụba ebe a na nri ebe a ebe a ka ebumnuche bụ inwe ike ịgbanwee mgbe ị na-eri ị na-ere ọkụ calorie site na iri nri na mgbe ị na-erighị, ị gbanwere abụba na-ere ọkụ iji gbaa abụba gị ọkụ, insulin a na-achịkwa insulin nwere ike mgbe niile mee ka ọ dịkwuo mfe, mana ọ na-ewe oge iji rute ebe ahụ.
Echere m na nnukwu nsogbu ndị mmadụ na-eme nke a ma ọ bụ na-ebugharị oge ọ bụla bụ na ọ bụ omume dị otú a ka mmadụ na-eri nri mgbe ndị mmadụ rutere n'ụlọ, nke ahụ ga-abụ nnukwu ihe mgbochi, nke ga-emeri bụ imeri àgwà nke iri nri ya mere ọtụtụ mgbe. E nwere nnukwu bodybuilders m ma nke na-eri nri otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’ụbọchị, ha anaghị eri nri ụbọchị niile, ma enwere ndị tara akpụ mara na ha na-eri ise? Nri otu ụbọchị na nke ọma, ha ga-enwe nsogbu na ha, mana isi okwu bụ, kwụsị omume ahụ, ọ ga-eri nri ugbu a nke ga-echekwa gị nnukwu ego n'ihi na ị gaghị enwe ọtụtụ nri ịzụta , nke ahụ bụ otu ihe dị mma na ị ga-enwekwa ahụ ike karịa ụbụrụ gị ka ị na-arụ ọrụ ọgụgụ isi na ị ga-edozi nsogbu ahụike ọ bụla metụtara nri ụbọchị kwa ụbọchị na-enweghị nri ma na-abawanye ruo abụọ ruo mgbe i ruru ihe mgbaru ọsọ gị mgbe ahụ ị nwere ike ikpebi ma ị chọrọ ịnọnyere mmadụ abụọ ma ọ bụ soro mmadụ atọ gaa. Ọ dabere n'ezie n'ihe ole na ole n'afọ gị.
Mgbe ị dị obere, ikekwe ị ga-eri nri itoolu atọ. Ọ bụrụ na ị na-emega ahụ dị ka onye nzuzu, ị ga-eri nri atọ, mana ọtụtụ ndị na-emega ahụ ga-eri nri abụọ ma ha agaghị eche na ọ bụrụ na ị gaghị abụ abụba, ọ ga-esiri gị ike ịlaghachi na shuga ma na-agba ahụ gị na shuga N'ihi na ị na-agbanye isi iyi nke ike gị yana n'ụzọ abụba ọkụ ma ọ bụ ketosis bụ mmetụta mbụ anyị nwere na ahụ anyị na-alaghachi azụ, yabụ na nso nso a ka anyị malitere ịbanye na abụba na shuga na-agba ọsọ n'oge gara aga. Afọ 100 nke mere na nke a bụ ihe okike zuru oke maka ahụ anyị, ahụ anyị na-achọ ịmị abụba, mana anyị kwesịrị ịme omume na-ebu ọnụ oge niile iji mezuo ya, ọ dị mma ka ọ bụrụ elekere 11:30 na elekere ise ka nke a nwaa ma biputere ihe ị kwuru n'okpuru
Iri nri n’abalị asaa anaghị enyere gị aka ịkwụsị ibu?
Na tụgharịa n'akụkụ, a obere 2013 ọmụmụ bipụtara na British Journal of Nutrition chọpụtara na ndị na-erighị nrin'etiti awa nke7 elekerena 6 elekeretụfuru ibu.Ọkt 20 2020
Kedu ka oge nri si emetụta abụba metabolism?
A na-adịbeghị anya ọmụmụ bipụtara na Journal of Clinical Endocrinology &Ọkpụkpụchọpụtara na ọ bụrụ na ị na-achọ ifelata, naogenke gịnriihe.Iri nrimbubreyonri abalịkpatara mbelata 10 naabụbana-ere ọkụ ma e jiri ya tụnyere oge mbụnri abalị.Ọnwa asaa 17. 2020bọchị 2020
A na - akpọ isiokwu nyocha a 'oke ibu na oke nhichapụ adipocyte nke akụrụngwa elekere Arntl'. E wepụtara ya na Natural Medicine site na FitzGerald Laboratory na Mahadum nke Pennsylvania na Disemba 2012. Iji kwuo maka edemede a, ka anyị ghọta ihe nguzo ike na etu esi achịkwa ya.
Ikike ume bụ nguzozi n’agbata ike anyị na-enweta na ike anyị na-eji. Anyị na-enweta ume site na nri anyị riri ma anyị na-eji ike site na ịgagharị, iku ume, wdg. Iji jigide ụfọdụ ahụ, ahụ anyị ga-enwerịrị ikike, ya bụ, ike anyị ga-ewere dị ka ọnụọgụ ahụ nke ike anyị na-eri.
Ọ bụrụ na anyị ewere ike karịa ka anyị na-eri, a na-echekwa ike a na abụba ma anyị buru ibu nwere ike ide usoro a: Ike anyị na-eri site na nri hà na ume anyị ji arụ ọrụ na ihe anaghị eji ya echekwa. Enwere ọtụtụ ihe na - emetụta nguzo ike, dịka oke ibu na erighị ihe na-edozi ahụ, mana ọrịa thyroid na ọrịa shuga n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere, ọ dị mkpa ịghọta otu esi eme ka ike gwụrụ yana ihe na - eme mgbe ike ume na - apụ.
Edemede a na - agba mbọ ịghọta etu esiri circadian anyị ma ọ bụ elekere dị n’ime ya na - achịkwa. Ya mere, gịnị bụ ụda olu circadian? Ahụ anyị? Ọrụ na elekere 24 nke usoro mgbede ehihie nke na-achịkwa ụra, ịmụrụ anya, ọrụ mgbaze, wdg. Ihe atụ doro anya nke mkpa nke ụda circadian a bụ jet lag, mgbe ụda circadian nke ahụ anyị na-arụ ọrụ. ya na ubochi / ehihie, naeme ka anyi buru ura ma agu agu n’oge adighi nma rue mgbe aru ayi n’agali iga n’abali ohuru - Gbanwee ihe n’abali.
Usoro egwu anyị nke circadian nwere ike imetụta omume iri nri anyị wee bụrụ etu ume anyị siri dị. Akụkụ circadian a nke m na-ekwu maka ya bụ elekere circadian nke dị n'etiti nke na-emeghachi omume na ntanetị ụbọchị iji chịkwaa omume. Agbanyeghị, enwerekwa rhythms circadian nke akọwapụtara maka anụ ahụ dị iche iche yana nke a na-arụkọ ọrụ na elekere mgbama dị n'etiti yana nke na-achịkwa omume nke anụ ahụ a kapịrị ọnụ.
Ndị ọkà mmụta sayensị nọ n’isiokwu a nwere mmasị ịmụ akụkụ okirikiri nke mkpụrụ ndụ adipo anyị na-akpọ adipocytes. Ebe ọ bụ na a na-echekwa ume n'ụdị abụba, anụ ahụ dị egwu na-arụ ọrụ dị mkpa na ntinye ume. Ya mere, ndị ọkà mmụta sayensị jụrụ onwe ha ụdị ọrụ abụba a ma ọ bụ adipocyte a kapịrị ọnụ na-arụ maka nguzo ike? Iji mee nke a, ndị sayensị jiri oke.
Naanị ha na-akpaghasị usoro circadian nke adipocytes site na iji mkpụrụ ndụ ihe nketa wepụ nanị protein a na-akpọ Arntl na adipocytes, ụmụ oke nri dị oke abụba ma nyochaa ahụ nke ụmụ oke ahụ ma e jiri ya tụnyere ụmụ oke nkịtị na-enwekarị usoro ụda circadian. Icemụ oke nwere ọgba aghara nke adipocytes dị arọ ma nwee 50% karịa abụba karịa ụmụ oke nkịtị: ha buru oke ibu! Ibu, ndị ọkà mmụta sayensị nyochara ihe dị iche iche: - mmega ahụ - ole calorie ụmụ oke ahụ riri - ike ole oke ahụ jiri - oge oge ụmụ oke riri Ndị sayensị ahụghị ọdịiche dị na mmega ahụ dị n'etiti otu abụọ ahụ na enweghị ọdịiche dị na calorie oriri. N'ihi ya, ụmụ oke ahụ rụgidere otú ha rikwara, ma ha dị arọ karị! Kedu ihe nwere ike ịkọwa ọdịiche ndị a? Ọfọn, ọ na-apụta na ụmụ oke nwere nsogbu adipocyte circadian jiri obere ume wee rie nri ụbọchị na obere n'abalị ma e jiri ya tụnyere ụmụ oke nkịtị na-eri nri n'abalị na obere n'ụbọchị, na-akpata oke ibu na ụmụ oke ndị a.
Ya mere, ndị ọkà mmụta sayensị nyere ụmụ oke nkịtị otu nọmba calorie ma ọ bụ naanị n'abalị ma ọ bụ naanị n'ehihie, ha hụkwara oke oke ibu na ụmụ oke na-eri nri n'ehihie karịa n'abalị zuru ezu iji kpatara oke ibu na oke! Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na nke a bụ n'ihi na iri nri n'oge na-adịghị mma (oge nke na-adabaghị na elekere etiti gị) na-eme ka ahụ gị na-echekwa kama ịlafu ike iji gbanwee nguzo ike iji nweta uru bara uru ma duga oke ibu. N'ezie, enwere ihe akaebe na nke a na ụmụ mmadụ: ndị ọrụ na-arụ ọrụ abalị na-eri nri n'abalị, na-enwe usoro ọgbụgba circadian na-arịwanye elu, na-enwewanye ụba nke oke ibu na ọrịa metabolic. nke ụbọchị.
Nke a na - ebelata ume ha na - etinye (maka na o dakọghị na klọọkụ ahụ) ma na - ebute uru ibu. Elekere Circadian nwere ike ijikwa oge nri oriri, nke na-eduga oke ibu na ụmụ oke ndị a. Oge nke iri nri na-emetụta ọkwa nke polyunsaturated abụba n'ime ọbara (ndị a bụ abụba dị mma nke nwere ike ịdị mma maka ahụike gị ma ọ bụrụ na iri ya na oke).
N'ụbọchị, ọkwa nke abụba ndị a dị elu, n'ihi ya agụụ anaghị agụ ụmụ oke. N’abalị, ụkpụrụ ndị a na-ada, nke mere ka ụmụ oke nwee agụụ na-eri nri, a chọpụtakwara na ụmụ oke nwere nsogbu mmụọ adipocyte nke nwere nsogbu nwere abụba polyunsaturated dị ala n’ụbọchị. Nke a bụ n'ihi na ụmụ oke a tọhapụrụ abụba ole na ole na-agbanye n'ọbara n'agbanyeghị na ha riri otu abụba dị ka oke ụmụ oke - obere polyunsaturated fatty acid dị elu maka ọrụ ịba ụba nri ụbọchị? Ọ bụrụ otu a, ịba ụba abụba ndị nwere polyunsaturated na ụmụ oke ndị a kwesịrị igbochi uru bara ụba n'ihi na ụmụ oke anaghị agụ agụụ n'ehihie ma ha anaghị eri nri n'ehihie, kama na-eri nri n'abalị ma nwee obere ibu.
N'ezie, oke oke abaghị oke mgbe ndị ọkà mmụta sayensị nyere ụmụ oke nri ndị nwere oke abụba na mgbatị mmụọ adipocyte na-agbakwunye na abụba polyunsaturated! Ha na-eri nri na oge nke ehihie (n'abalị) ma na-emefu ike nkịtị, n'ozuzu ha dịka oke oke. Nke a pụtara na obere polyunsaturated abụba dị n'ime ụmụ oke nwere nsogbu ọgbụgba circadian nke adipocytes bụ maka mmepe nke oke ibu Increba ụba nri ụbọchị n'ụbọchị ma belata mmefu ike (ikekwe dabere na oge) Gịnị ka ọmụmụ a gosipụtara? Ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara na oke ndị a nwere ike ịkpaghasị usoro circadian kpọmkwem na adipocytes ma ọ bụ na anụ ahụ adipose na oke na-ebu oke ibu, ọ bụghị n'ihi na ha riri calorie karịa, kama n'ihi na ha riri calorie karịa n'ehihie karịa n'abalị. Nke a bụ n'ihi na ọgba aghara aghara aghara aghara na adipocytes n'ụbọchị na-eduga n'ọkwa dị ala nke polyunsaturated fatty acids n'ime ọbara.
Nke a na-eme ka agụụ ahụ na-agụ agụụ n'ụbọchị mgbe nri oriri na-adịkarị ala. N'ime ụmụ oke, ị moreụkwu nri n'oge ụbọchị kama n'abalị na-eduga na ngbanwe nke ike na ike na-echekwa kama iji ya, nke na-eduga oke ibu. Ọmụmụ ihe a na-egosi na rhythms circadian na anụ ahụ gị nwere ike ịchịkwa oge na nguzo ike nke nwere ike ibute oke ibu ma ọ bụrụ na usoro circadian a bụ dysregulated.
Kedu ihe nke a pụtara gị? Oké ibu abawanyewo nke ukwuu n'ime afọ 100 gara aga, yabụ ọ nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ ịtụle ịdị mkpa nke ihe ọmụmụ a n'ihe gbasara mgbanwe. O doro anya na mmụba nke oke ibu bụ n'ihi ọtụtụ calorie na nri anyị na obere mmega ahụ, mana gịnị ma ọ bụrụ na oge nri oriri na-ekerekwa òkè? Ọrụ dị mkpa? N’obodo ukwu ọ bụla, ị nwere ike bute nri gị n’ebe a na-ere nri ehihie na abalị. Pụrụ iche n’echiche na otu narị afọ gara aga ọ bụkarịrị nsogbu karịa! Ya mere, gịnị ma ọ bụrụ na nnweta na oriri nke abalị (mgbe ahụ anyị kwesịrị ihi ụra karịa iri nri) na-enye aka na oke ibu taa? Mgbe anyị n’agbalị ịghọta etu esi achịkwa ibu arọ, ihe ọmụmụ a n’egosi na ọ dịkwa mkpa ileba anya na rhythms circadian na anụ ahụ adipose nke nwere ike ijikwa mgbe agụụ na-agụ anyị. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ka ụmụ mmadụ na-emechi ọmụmụ ihe, isiokwu a na-enye usoro anyị nwere ike ịnwale ịchịkwa uru bara ụba na ndị nwere nsogbu ihi ụra ma ọ bụ na-agbanyekarị mgbatị circadian dysregulated site na itinye abụba ndị ọzọ na polyunsaturated na nri ha, mana ọtụtụ ihe niile bụ ọjọọ, n'ihi ya, ọ chọrọ a nlezianya itule! Ndị ọkà mmụta sayensị na-anwa ịghọta mgbe niile ụzọ dị iche iche, na elekere abụọ dị n'ime ime, nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ iji kọwaa ihe dị mgbagwoju anya n'akụkụ ọ bụla nke physiology sitere n'ọbara abụba polyunsaturated abụba ruo na akparamaagwa nke agụụ chocolate!
Iri nri ọ bụla n’ime awa abụọ na atọ ọ na-enyere aka ịkwụsị ibu?
Iri nriobere, nri kwesịrị ekwesịọ bụla 3 awana-eme ka ahụ gị nwere ike ịme abụba, Cruise na-ekwu. Ọ bụrụ na ịmeghịriemgbe ọ na-ezuru, ọ na-akọwa, ahụ gị na-abanye n'ọnọdụ 'nchekwa agụụ', ịchekwa calorie, ịchekwa abụba, na akwara na-ere ọkụ (ọ bụghị abụba) maka ume.Rie 3 kwa ogemgbe nke ahụ mechara.bọchị 2020
jaket mmiri ozuzo jaket
Kedu nke na-eme? Nke a bụ Sean Nalewanyj si MuscleGainTruth.com. Na nkuzi nke taa, aga m enye gị ndụmọdụ nke ga-agbanwe ndụ gị n'ụzọ nkịtị maka nsonaazụ kacha mma site na mmemme ahụ gị mgbe ị na-eme obere ọrụ.
Ma olee ihe ga-aka mma, nri? Ya mere, jide n'aka na ị paya ntị na ya. Ugbu a, otu ndụmọdụ dị nnọọ mkpa nke ị na-agụbeghị na-enweghị obi abụọ n'ihi na 95% nke ndị ọkachamara ga-akwalite echiche a bụ echiche nke iri nri kwa ụbọchị. Ekwuru na iji bulie nsonaazụ gị, ị ga-eri ihe dị ka nri isii kwa ụbọchị, ha niile kewara abụọ ruo atọ.
A na-enyekwa ndụmọdụ a n'ihi na ọ na-ekwu na iri nri kwa ụbọchị ga-eme ka ahụ gị nọrọ n'ọnọdụ anabolic. Ọ ga-egbochi mmebi ahụ. Ọ ga - eme ka ịdị jụụ gị - abụba ọkụ na - abawanye na ogo gị metabolism.
Ọ bụrụ n'ezie na ị lelee nyocha dị n'azụ echiche a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, nchọpụta ahụ na-egosi n'ụzọ doro anya na nri ugboro adịghị enwe mmetụta ọ bụla na ngwongwo gị. Ọ bụrụ na ị na-eri nri kwa ụbọchị, ọ naghị eme ka uru ahụ too.
Ọ naghị belata ọnwụ. Ọ naghị eme ka abụba ghara ịba ụba. Ọzọkwa, nke ahụ gosipụtara nke ọma.
Nke bụ eziokwu bụ na mgbaze bụ otu ụzọ nwayọ nwayọ. Ọ dịghị amasị ka ị rie nri, nri ahụ abanye n’ime afọ gị, banyekwa n’akpa nri gị, n’ime eriri afọ gị, nri na-edozi ahụ na-abanye n’ime sel gị, ị ga-erikwa ọzọ n’ime awa atọ. Ọ bụ ihe incredibly nwayọọ nwayọọ usoro; ọbụna protein ndị na-agbari ngwa ngwa na-etinye uche naanị na ọnụego nke ihe dị ka gram ole na ole kwa elekere.
N'ikwu eziokwu, otu nri erimeri nwere ike idobe ahụ gị n'ọnọdụ ụgbụ anabolic ruo elekere ise ruo asaa, ọbụlagodi na ị kwuo nke a, ịgafe ya ruo otu awa ma ọ bụ abụọ, ọ bụghị na ụwa niile na-ada ada ma gị, ịmara, tufuo ọtụtụ akwara naanị n'ihi na ichere elekere elekere ma ọ bụ abụọ, ndụmọdụ m nyere gị dị mfe. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye uru ahụ gị ma ọ bụ gbaa abụba, ọ bụrụhaala na ị na-eri ihe dị ka nri atọ kwa ụbọchị, ihe dị ka elekere ise na asaa ọ bụla, ị na-eme ihe ọ bụla ị nwere ike ime gbasara ugboro nri. iji bulie nsonaazụ gị. Site na ihe kachasị mkpa ị ga - eche bụ ma ọ bụrụ na ị na - eme ihe dịka awa abụọ ma ọ bụ atọ, kama ọ bụ ihe ị ga - eme ya na blọk ruo elekere 24.
Ihe m na-ekwu site na nke ahụ bụ na 95% ma ọ bụ karịa nke nsonaazụ ị na-enweta site na mmemme nri gị na-esi na calorie gị gbakọtara karịa oge 24. Yabụ na ị ga - anọrịrị na calorie net ka ị wee nwee ike inwe ahụ ike nke ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya, wee hụ na ị ga - enweta protein, carbohydrate na abụba site na nri nri kwesịrị ekwesị maka ụbọchị ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmụọ maka ihe ọ bụla kpatara ya ọ ka mma ma ọ bụrụ na ị na-eri nri oge niile n’ụbọchị, maọbụ ọ bụrụ na ị nwere nnukwu agụụ wee họrọ iri ụdị ahụ, mgbe ahụ ọ dị mma, gaa n’ihu. Mana ọ bụrụ na ị dị ka m ma ọ bụrụ na ịchọta na ọ bụ nnukwu ọrụ iri nri kwa awa abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ nweghị mmasị na echiche nke nrụgide, ị maara, kwa elekere abụọ ma ọ bụ atọ ọ bụla, oh, anaghị m eri, ịmara ebe - olee ebe nri ọzọ m ga-esi? Anọ m na - anọ m n’ọnọdụ catabolic.
Ọ bụrụ na ị - ọ bụrụ na ịchọrọ inwere onwe gị na ya wee were ndụmọdụ a n'ihi na dịka m kwuru, nyocha mara mma na-egosi na nri ugboro l Ọ naghị emetụta akara ala gị. Echere na ịchọta ihe nkuzi a bara uru. Ọ bụrụ n'ịchọrọ atụmatụ nri nri site-na-na-akwụ ụgwọ nke ga-akọwa ihe ị kwesiri ịhụ kwa ụbọchị, nri, ọtụtụ protein, calorie, gaa MuscleGainTruth.com.
Njikọ ahụ dị n'ọhịa nkọwa. Naanị ha na-enye akụkọ ole na ole gbasara onwe gị, afọ gị, ogo gị, ibu gị, ọkwa ọrụ gị, ebumnuche gị yana, ị maara, e mepụtara usoro ihe oriri na-edozi ahụ ka ị nwee ike ịgbaso ozugbo na enweghị nrụgide ma ọ bụ eme ihe kwesiri ichikota. Atụmatụ nri ndị a na-eji nri isii kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iri obere nri, ị nwere ike belata ha; ọ bụrụ n ’ịchọrọ iri nri anọ, nke ahụ dị mma, nri atọ, ọbụlagodi na ịchọrọ iri nri abụọ nke ahụ pụtara na m ga-agwa ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ.
Gịnị ka m kwesịrị iri n’abalị iji felata?
Dum, minimally hazienridị ka mkpụrụ osisi, kiwi, goji berry, edamame, pistachios, oatmeal, yogọt larịị na akwa na-eme ka ọ dị mfe, dị ụtọ ma dịkwa mma n'oge-n'abalịnri. Ọtụtụ n'ime ndị anriọbụna nwere ogige na-akwado ụra, gụnyere tryptophan, serotonin, melatonin, magnesium na calcium.24.06.2018
Oge nri ọ na - emetụta oke ibu?
Na nchikota: Ndi nchoputa achoputawo nke ahunri ogeazum di ka obubu onu onu ma obuna-eri nrina mmalite ehihie pụtara inyere ndị mmadụ akahapụ ibu ibusite n'ibelata agụụ kama ị burningụkwu calorie, dị ka otu akụkọ si kwuo.24.07.2019
Oge nri ọ nwere ihe dị mkpa maka mfu abụba?
Maka ndị egwuregwu a ma ama,oge edozinwere ike inye uru dị mkpa n'ịsọ mpi. Agbanyeghị, nyocha ugbu a anaghị akwado mkpa ọ dịoge edozin'ihi na ọtụtụ ndị na-nanị na-agbalịidaibu ibu, nweta akwara ma ọ bụ melite ahụ ike.03.06.2017
Enwere m ike ifelata rie nri ugboro atọ n’ụbọchị?
Mgbe ụmụ nwanyị buru oke ibu riri nriatọ nri n'ụbọchịm'ọ bụ mini mininri,atọobibia rụpụtara ngwa ngwaọnwụ ọnwụ, a ọmụmụ ihe ọhụrụ na-achọta.12.12.2012
M ga-ebu ibu ma m rie nri ugboro abụọ n’ụbọchị?
N'okpuru nri obere kalori, ndị mmadụna-eri nri ugboro abụọmakaụbọchịatụfuru iheibu ibukarịa ndịna-eri nriisii kwaụbọchị. Ma na-enweghị ụkọ ume, ọ bụghị elu ma ọ bụ obere-ugborona-eri nriìgwèhapụ ibu ibu.
Kedu oge n'abalị ị kwesịrị ịkwụsị iri nri iji belata ibu?
Expertsfọdụ ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ ịkwụsịnrioriri na mgbede, dịka metabolism na-akwụsịlata mgbe nke a gasịrịoge. Agbanyeghị, nke a agaghị ekwe omume maka mmadụ niile. Peoplefọdụ ndị agaghị enwe ike iri nri anyasị ruo elekere asaa nke abalị. ma ọ bụ mgbe e mesịrị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ kacha mmazere nrimaka awa 2-3 tupu ị lakpuo ụra.Eprel 23 2020
Kedu oge kacha mma iri nri mgbe ị na-achọ ifelata?
O doro anya na iri nri dị mma na njikwa akụkụ dị mkpa mgbe ị na-achọ ifelata. Ma oge nri gị na-arụ ọrụ dị mkpa iji mee ka atụmatụ ọnwụ gị dị ngwa. Onye na-ahụ maka ndụmọdụ n'ihe gbasara nri na South Mumbai bụ Niti Desai kwuru na, 'Oge nri gị dị mkpa dịka ihe ị na-eri na etu ị ga-eri.
Kedu ka oge nri si emetụta ọnwụ gị?
Mgbanwe nke Circadian: Otu nri nri oge si emetụta oke abụba. Ihe akaebe na-akwado nke a, na nyocha nke ugbu a na-atụ aro na oge nri nwere ike imetụta ụdị usoro ọgwụgwọ dị iche iche, gụnyere ụra ụra gị / ụra gị, isi ahụ ọkụ, arụmọrụ na ịmụrụ anya 1.
Kedu ụzọ kachasị mma iji felata ngwa ngwa?
Iri obere nri ugboro ugboro bụ ezigbo nhọrọ. Ebila ogologo oge n'etiti nri gị n'ihi na ọ na-eme ka ị na-eribiga nri ókè mgbe ị na-eri nri. ' Gbalịa inwe mkpụrụ, mkpụrụ osisi, smoothies na nri gị. Bawanye nri mkpụrụ osisi gị na nke inine n’iru n’etinye ọsọ ọsọ.